ZANAKAVARATRA : Tsy nanadino nanolotra fanomezana ho an’ny mpikambana
Tsy nanadino ny mpikambana ao amin’ny fikambanana Zanakavaratra izay tarihin’ny filoha nasionaly Papa Soulé. 2 janvier 2018
Toy ny fanao isan-taona ho fiatrehana ny fety faran’ny taona sy ny taom-baovao dia nanolotra fanomezana ho an’ny mpikambana rehetra sy ny mponina manodidina ny trano fonenany ity farany ny alahady teo. Tamin’ny kabary nataon’i Mao izay nisolotena ny filoha nasionaly Papa Soulé nandritra ny lanonana tsotsotra notanterahana tao 67 ha dia nambarany fa « izao fanomezana izao dia midika fa mijoro hatrany ny fikambanana Zanakavaratra ary mitsinjo ny mpikambana ao aminy ».
Nisaotra ny filoha nasionaly, Papa Soulé kosa tamin’ny anaran’ny mpikambana rehetra ingahy dokotera Emilien. « Maromaroa ny tahaka an’i Papa Soulé ary hitombo be ny nialany. Fihetsika mendrika fiderana no nataony ary manome toky izahay fa tsy hivaky na hivaha ny fikambanana Zanakavaratra izay tarihiny », hoy ity farany. Akoho amam-borona sy vary ary menaka no natolotra ny mpikambana tamin’io andro io. Nanome voninahitra ny lanonana ny minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha, Anandra Norbert izay raiamandreny avy amin’ny tapany avaratry ny Nosy. Vary iray gony sy menaka ary akoho amam-borona maromaro no natolotra an’ity farany amin’ny anaran’ny filoha nasionalin’ny fikambanana Zanakavaratra.
Niaraka nitsena ny taom-baovao
Tsy vitan’ny fanolorana fanomezana fotsiny no natao tamin’ny alahady teo fa niaraka nitsena ny taom-baovao ny mpikambana tao amin’ny trano fonenan’i Papa Soulé ka tamin’izany no nanaovan’ity farany kabary firarian-tsoa ho an’ny mpikambana rehetra na eto an-drenivohitra na eny amin’ny faritra. Fiaraha-misakafo sy dihy ary fanapahana mofomamy saritanin’ny faritanin’Antsiranana no nitsenana ny taom-baovao.